रवि लामिछानेको मुद्दा ल ड्ने वकिल कन्चनको घरमा, अब के हुन्छ ? (भिडियो) – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Video/रवि लामिछानेको मुद्दा ल ड्ने वकिल कन्चनको घरमा, अब के हुन्छ ? (भिडियो)
तर पनि चिकि`त्सकले उनलाई निकै बचाउने प्रयास गरेका थिए । धेरै दिनको बे हो`सी अवस्थावाट उनी उनी केही दिन अघि बोल्न सक्ने भएका थिए । तर पछिल्लो समय उनलाई फेरी निमोनिया भएको कारण अवस्था विग्रिएको हो ।
उनको हात खुट्टा समेत चल्न बन्द भएका थिए । यसैले थेरापी पनि सुरु गरिएको थियो । काठमाडौवाट गएका विशेषज्ञ टोलीले उनको उपचार गरेको थियो । आफुले माया गरेको मानिसलाई पाउन नसक्दा कञ्चनले आफैलाई स जा य दिएका थिए । नेपालको कानुन अनुसार उनीहरुको प्रेम र विवाह गर्ने उमेर भएको थिएन ।
सानै उमेरमा प्रेममा परेका उनीहरुले विवाह त गरे तर त्यो विवाह लामो समय सम्म टिक्न सकेन । चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको द`वावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो ।
प्रेमिकावाट अलग गराइयो । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो । त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन् कोठामा फर्किएर वि ष खा ए । करिब दुई महिनाको उपचार पछि उनको नि`धन भयो । आमाले एक्लै हुर्काएको छोरा गु`माउनु परेपछि उनको अवस्था निकै बे`हाल भएको छ ।
किन आयो फ्रान्सेली अत्याधुनिक लडाकु विमान भारतीय आकाशमा ? (हेर्नुहोस भिडियो)
अशोक दर्जीकी फुपू र बुबा मध्यरातमा रुँ दै मिडियामा, आखिर के भयो ?